Dhanzi yaLindsay Lohan inonakidza 'The Lilo' yaenda hutachiona - Nhau
Kuru Style Macelebs Varaidzo Blog
Dhanzi yaLindsay Lohan inonakidza 'The Lilo' yaenda hutachiona
Lindsay Lohan akapa chipo chenyika nyowani nyowani yekutamba, iyo yaakagadzira nerudo 'The Lilo.'
Pakupera kwesvondo, vhidhiyo yakabuda yemutambi-akachinja-muzvinabhizimusi achitamba kumahombekombe ake emahombekombe kuMykonos, Greece. Muchikamu chipfupi, Lindsay anoita bvudzi rakapetana, shimmying, zvigunwe zvishoma zvinokwenya uye kunyange twirl yechiyero chakanaka.
Mumaawa mashoma, chikamu chekutamba chakave meme.
Lindsay, iye amene, airatidzika kunge ari kuseka pakutamba kwake.
Musi waSeptember 3 akatumira mavhidhiyo mazhinji eiyo zvino-hutachiona dhanzi. Akavatora, '#DoTheLilo.'
Chishuwo chake chakapihwa naasina mumwe kunze kwaBusy Philipps uye pal yake Kelly Oxford, vaviri ava pavakadzokorora kutamba mukicheni.
@kellyoxford uye ini ndiri kuyedza nepatinogona napo kuti tikupe iwe izere Mykonos Lohan manheru eChishanu- Kutendeseka, zvakaomarara zvakaoma kurovera kupfuura zvaitaridzika. Kuremekedza. (kana iwe uchizviita, isu tinoda kuona! tag isu! ️)
Chinyorwa chakagovaniswa na Akabatikana Philipps (@busyphilipps) musi waAug 31, 2018 na7: 47 pm PDT
'@kellyoxford neni tiri kuedza nepatinogona napo kukupai izere Mykonos Lohan neChishanu manheru,' mutambi uyu akarondedzera vhidhiyo iyi. 'Kutendeseka, zvakaomesesa kuomerera pane zvaitaridzika. Kuremekedza. '
Vakabatikana vakakurudzira vamwe vanhu kuti vatambe, zvakare. Mushure mekunge aisa dudziro yake ye'Lilo, 'vanhu vakakurumbira havana kugona kubatsira asi kupindura.
'Zve rudo rwamwari ndingauye here,' akadaro Chrissy Teigen. Jenna Dewan akati, 'Unondiuraya.'
Selma Blair sezviri pachena akaedza kuita 'The Lilo' futi, asi akatadza.
'Ndakadonha ndichiyedza,' akadaro.
Lindsay anga achigara kumusoro kuGreek apo iye achifirimu yake nyowani yeMTV show nezve hupenyu hwake muMykonos semuridzi wekirabhu.
Zviripachena, ari kutamba kune kurova kwedhiramu rakasiyana uye achirarama hupenyu hwake hwakanakisa kunze uko.
'Flip kana Flop' nyeredzi Christina El Moussa anofunga ex ndeye 'yakakwana nguruve' yeiyo playboy mararamiro
priscilla presley achiri musainzi
kylie jenner uye travis scott
jenny mccarthy 1997 chikoro mibairo
ko khloe kardashian akarasikirwa sei nehuremu hwakawanda
ndiani mutongi joe brown akaroora